Raiamandreny mijoro : Tsy tokony hiandany ny Governemanta sy HCC -
AccueilRaharaham-pirenenaRaiamandreny mijoro : Tsy tokony hiandany ny Governemanta sy HCC
Raiamandreny mijoro : Tsy tokony hiandany ny Governemanta sy HCC
25/09/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nivoaka tamin’ ny fahanginany ireo raiamandreny mijoro omaly, manoloana ireo fihetsika mihoa-pefy ataon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana sy ny governemanta. Hatrany am-boalohany tokoa mantsy dia efa hita taratra ny asa tanterahin’ny tompon’ andraikitra voalohany anivon’ ny governemanta, dia ny praiminisitra izany, fa tsy manaraka ny tokony ho izy noho ny fiandaniana amina kandidà. Samy ninia tsy niteny ny rehetra, saingy tsy aritr’ireo raiamandreny intsony, ka izy ireo nilaza izao hoe “ fanomanana fifidianana alohan’ny fotoana no nampiandraiketina anareo sy andrasan’ny vahoaka aminareo, ao anatin’ ny fitoniana sy fahamarinana ary fahalalahana. Aoka hiseho ho mpitarika Hendry sy mahatoky ianareo, ka tsy ho vesaran’ny politika miandany izay hiteraka fisaraham-bazana eo anivonareo sy savorovoro” hoy ireo raiamandreny mijoro. Azo lazaina fa manahy amin’ ny mety ho teritery ataon’ ny mpanatanteraka ireo raiamandreny mijoro, noho izy ireo manana rantsa-mangaika any amin’ ny faritra maro samihafa. Io ntony io no nilazan’ireo raiamandreny mijoro fa “ilain’ny vahoaka, tompo-pahefana, ny maneho ny safidiny amin-kahalalana ka sady tsy ho voatery no tsy voafitaka” hoy hatrany ny fanazavana.
Tsy ny fahefana mpanatanteraka ihany anefa no niantefan’ny hafatr’ireo raimandreny mijoro, fa teo ihany koa ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana. Isan’ny nokianin’ny raimandreny mijoro tokoa mantsy ny fihetsika mamohehitra, miala amin’ ny asa tokony hotanterahin’izy ireo. Hiarahan’ny rehetra mahalala fa miompana amin’ny fanaraha-maso ny fanarahana ny lalàm-panorenana no asan’ny HCC, saingy hita fa mivoana mankany amin’ ny politika izany. Antony nilazan’ireo raiamandreny mijoro fa “ andrim-panjakana ambony eto amin’ ny tany sy ny fanjakana no sehatra misy anareo , satria ianarao no manitsy ny fiainan’ny firenena ho araka ny lalàna fototra nofidiny, handrindra sy hanasoa ny fiainany.
Manantena sy mitaky fahamarinana aminareo ny vahoaka malagasy, ka ny fampiharana ny lalàm-panorenana tokoa no himasonareo fa tsy sangodina politika” hoy ireo raiamandreny mijoro. Eto izany dia efa tsy takona hafenina intsony, ny tsy fahalavorarian’ny asan’ny HCC, satria ankoatra ny SEFAFI, izay nanakiana mafy azy ireo dia mijoro indray koa ireo raiamandreny manampy izany. Koa raha ny andry farany amin’ ny fifidianana tahaka ny HCC no be mpanakiana tahaka izao, ahoana izany ny tohin’ ny fifidianana ho avy ny 7 novambra 2018 ho avy izao.
Hala-bato mibaribary : Misy andian’olona karamaina hifidy
Manao ny fomba rehetra entina hangalaram-bato ny kandidà iray, izay nihevitra ny ho lany tamin’ ny fifidianana dingana voalohany. Omaly dia namboraka io zava-misy io, ireo andian’olona nanatanteraka ny hala-bato tamin’ ny fifidianana dingana voalohany ...Tohiny